Peach Girl ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
J-Movie များကို တောင်းတနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် 2017 အစောပိုင်းမှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Peach Girl ဆိုတဲ့ Live Action လေး တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ …
Anime series ကို အခြေခံထားတာဖြစ်ပြီး Comedy , Romance ဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်တာကြောင့် J-Movie ချစ်သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာ အသေအချာပါပဲ …
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် –
မိုမို-ချမ် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက သူ့ အသားအရေက မဲတယ်ဆိုပြီး ဆိုက်ကို ဖြစ်နေတယ် … တစ်ကျောင်းလုံးကလည်း သူ့ကို သဘောမကျကြဘူး …
ကာရီ ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက ကျောင်းမှာ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ ပေါ်ပြူလာလေး … သူက မိုမို-ချမ် ကို စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တယ် …
မိုမို-ချမ် မှာက ဆဲ ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးရှ်ိတယ် …
သူက မိုမို-ချမ် လိုချင်တာ ကို သူကလည်း အမြဲတမ်းလိုချင်တယ် …
မိုမို-ချမ် ရဲ့ Crush က တိုဂျီ ဆိုတဲ့ သူ …
မိုမို-ချမ် အလယ်တန်းကတည်းက သဘောကျခဲ့တာ …
အဲ့ဒါကို ဆဲ တစ်ယောက်သိသွားတော့ ဘာတွေလုပ်မလဲ ? နောက်ပြီး ကာရီ နဲ့ တိုဂျီကြားမှာ မိုမို-ချမ် တစ်ယောက် ဘာတွေဖြစ်မလဲ ?
ဇာတ်ကားက အကြောင်းအရာအားလုံး ပြောလိုက်ရင် ပေါ့သွားမှာစိုးလို့ မပြောတော့ဘူး …
တကယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ … ဇာတ်ကွက်လေးတွေလည်း လှတယ် …
စကားလုံး သူံးထားတာလေးတွေလည်း လှတယ် …
ဒီကားလေးက ကိုယ် အကြိုက်ဆုံး ဂျပန်ကားထဲမှာ ပါသွားပြီ … ဇာတ်လမ်းလေးကို ကောင်းမကောင်း ကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြပါ … ကြည့်တာတော့ တကယ် ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ကားပါလို့ …
Rating အရလဲ IMDb မှာ 7.5/10 ရရှိထားပါတယ် ….
Openload.co Myanmar664 MB Download Soliddrive.co Myanmar664 MB Download
ဒီတစ်ခါတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးAnimationကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ IMDB 5.9 ရထားတဲ့ musical,fantasy,comedy အမျိုးအစားလေးပါ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း Demi Lovato,Avril Lavigne,Sia,Ashley Tisdaleစတဲ့နာမည်ကြီးတွေချည်းဖြစ်တဲ့အပြင် musical ကားလေးလည်းဖြစ်တော့ အသံကောင်းကောင်းနဲ့သီဆိုထားတဲ့သီချင်းတွေလည်း အများကြီးပါပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဖိလစ်ပီချားမ်မင်း ဆိုတဲ့မင်းသားတစ်ပါးက ကျိန်စာသင့်နေတဲ့အတွက်အရမ်းကိုနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပြီဆွဲဆောင်မှုရှိတော့ သူနဲ့မျက်လုံးချင်ဆုံမိတဲ့မိန်းကလေးမှန်သမျှက သူ့ကိုစွဲလန်းပြီးချစ်ခင်ကြတယ် (အဲ့လိုကျိန်စာမျိုးကိုယ်တွေလည်းမိချင်လိုက်တာ 😂😂) သူ၂၁နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရောက်ရင် အဲ့ကျိန်စာကထာဝရပိတ်မိသွားပြီးတစ်နိုင်ငံလုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကွယ်ပျောက်ပြီးလူတွေရဲ့စိတ်မှာအမှောင်အတိဖုံးသွားမှာဖြစ်တယ် ၂၁နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရဲ့ နေဝင်ချိန်မှာ အချစ်စစ်ရဲ့အနမ်းကို…